Sida loogu daro saamaynta bokeh sawirka Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Saamaynta bokeh waxa ay noqotay sannadahan ay qaar ka mid ah soo saarayaasha taleefannadu ku faanaan markay soo bandhigaan warkooda suuqa mobilada. Waxaa jira barnaamijyo badan iyo taleefanno isku mid ah oo ay ku jiraan saameyntan sida caadiga ah si aan ula wadaagi karno sawirradeena shabakadaha bulshada iyo shabakadaha shabakadaha.
In kasta oo aan marwalba haysanno Adobe Photoshop si aan u awoodno inaan caddeeyo iyo Abuur saamayn bokeh leh dhammaystir ka fiican ta barnaamijyada qaarkood soo jeediyaan. Taasi waa sababta aan kuu baran doonno sida loogu daro bokeh saamaynta sawirka barnaamijkan baaxadda leh, sidii aan ku sameynay casharkaan, taasina waxay awood u yeelatay inay bedesho muuqaalka naqshada, sawirka iyo dib u hagaajinta tobanaankii sano ee la soo dhaafay.
Sida loogu daro saamaynta bokeh sawir
Marka hore waxaan u soconaa la wadaag sawirka aad soo dejisan karto una isticmaal inaad raacdo casharrada oo sidaa darteed waxaad la dhexjoogtaa qiimayaasha qaarkood:
Waxa ugu horeeya waa in la xusho qalabka xulashada degdegga ah ee leh furaha W.
Guji si isdaba-joog ah asalka sawirka adoo hoos u dhigaya furaha shaqada.
Haddii aan ka gudubno xulashada, markaan si fiican ugu hagaajinno tirada lammaanaha, waan isticmaali karnaa alt oo lagu daray jiir guji si aad u tirtirto qayb ka mid ah.
Marka asalka la doorto, waxaan xulashada ku rogeynaa kontarool + far waaweyn + I
Hadda waxaan mar kale riixnaa furaha W, oo riixnaa badhanka kore «Dooro oo codso ...».
Daaqada pop-up waxaan ku dalbaneynaa gacan 4px ah.
Hoos uga sii daaqada daaqada, waxaan fidinay "Dejinta wax soo saarka" oo "Send to" waxaan u dooranay "Lakab cusub oo leh lakabka lakabka"
Hadda xakamayso + guji maaskaro lagu abuuray lakabka si xulashadu mar kale u noqoto oo xulo asalka.
Waxaan hadda tagnaa Xulitaanka> Wax ka beddel> Kordhi> 1pixel.
Ku noqoshada isla goobta, laakiin waxaan dooranay Fade> 1pixel.
Hadda waxaan hubineynaa xulashada lagu sameeyay far weyn 'backspace si loo buuxiyo.
Daaqada xigta waxaan ku dooranaynaa Mawduuca sida ku cad qodobka oo guji OK.
Waxaan ka saarnaa muuqaalka lakabka shaashadda, waana inaan aragnaa shaxanka oo si faahfaahsan u faahfaahsan markii xulashada aan ku baabi'inayno xakamaynta + D.
Hadda lakabka asalka waxaan ku dooranay Shaandheeyeyaasha> Gallery Raadka Saamaynta Sawirka> Baadhitaanka goobta
Waxaan u dhaqaaqeynaa xarunta xoogaa kor.
Hadda waxaan madax Soft Bokeh si loogu wareejiyo ilaa 65%.
Qeybta nalka waxaan uga tageynaa labada isdabajooge 195.
Iyo Gudaha, illaa 32 pixels.
Waxaan ku dalbaneynaa cilladda OK. Tani waa natiijada ugu dambeysa:
Saamaynta bokeh waxay ku xirnaan doontaa sawirka aan hayno, markaa waa arrin tijaabo ah illaa intaad ka heleyso saameynta aad rabto seddexda xarimood ee ugu dambeeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loogu daro bokeh saamaynta sawirka Photoshop
Sida loogu badalo midabka timaha muuqaal ahaan Photoshop